तानातानमा ‘गृहमन्त्री’: थापा जता खुल्छन्, त्यतै बहुमतको निर्णय · Aawaj Nepal
तानातानमा ‘गृहमन्त्री’: थापा जता खुल्छन्, त्यतै बहुमतको निर्णय
आवाजनेपाल, २०७५ फाल्गुन २८ मंगलबार
काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेकपाभित्र ‘तानातान’ मा परेका छन् । पार्टीमा रहेका विभिन्न गुटमध्ये ३४ केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सफल गृहमन्त्री थापा सरकारमा मात्र होइन, पार्टी राजनीतिमा पनि निर्णायक देखिएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।
पार्टीको सांगठनिक एकता प्रक्रियामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच गुटगत प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा उनी कतै खुलेका थिएनन् । तर सचिवालय बैठकमा थापा एक्लै भए पनि ‘निर्णायक’ पोजिसनमा छन् । त्यसैले थापा तानातानमा परेका हुन् ।
नेकपा सचिवालयभित्र वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको एउटा गुट छ । अध्यक्ष ओली, महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको अलग्गै गुट छ । दुई अलग गुट देखापरेपछि थापा एक्लै भए पनि निर्णायक देखिएका हुन् ।
अध्यक्ष दाहाल अर्का अध्यक्ष ओली तथा नेपाल दुवै समूहसँगको समदुरी सम्बन्धमा देखिए पनि भित्री रूपमा उनी नेपाल पक्षसँग नजिकिन थालेका छन् । उनी तत्काल अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्ध बिगार्न र आफ्नो पक्षधरता खुलाइहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य थापा ओली इतर पक्षमा खुलेमा त्यो पक्षसँग बहुमत रहेको आधारमा आफूलाई पनि पार्टी्भित्र बोल्न सजिलो पर्ने ठम्याइ दाहालको छ । तर थापा नखुलिदिँदा नेकपाभित्रको सचिवालयमा समीकरण हेरफेर र अध्यक्ष ओलीको निर्णयमा ‘हस्तक्षेप’ गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा सचिवालयका कुनै नेता देखिँदैनन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र परिवारका नाममा खर्बौं सम्पत्ति, थोरै मात्र उपयोग
गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावन मार्ग निर्माण सम्पन्न
परिवारमै क्रुरता बढ्दो ! सात महिनामा श्रीमती हत्याका ६७ घटना
पोखराका सडकमै कायकीङ
ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटरमा ३ घण्टा ‘गोप्य’ बैठक, के भयो छलफल ?
सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने यन्त्र जडान, अब ६ महिना नयाँ उच्चाई पत्ता लाग्ने
मेस्सीको कप्तानीमा २३ सदस्यीय अर्जेन्टिनी टोली घोषणा
कम्पनी रजिसटर नं १५५७६३/०७३/०७४ सुचना विभाग दर्ता नं १०९/०७३/७४